Chocolate riri nwa m nwoke, gịnị ka m ga -eme? | Ndị Nne Taa
Nke Torres | 25/09/2021 20:00 | Ahụike
Ihe niile ụmụaka na -amụta ka ha bụ ụmụaka, omume ha na -enweta, ụkpụrụ nke ha ji etolite, na -aka akara ntọala ndụ okenye ha ga -adị. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịkụziri ha ihe site na nwata ka ha wee nwee ike ito eto n'ụzọ ọ bụla. Nri bụ otu n'ime ogidi dị mkpa nke ndụỌ bụrụ na ọ mee, ndụ agaghị ekwe omume na ọ bụ otu a ka a ga -esi kụnye ya n'ime ụmụaka.
Nsogbu bụ na n'ọtụtụ oge, a na -eji nri eme ihe dị ka usoro ntụrụndụ, ndọpụ uche, afọ ojuju na ọbụlagodi ụgwọ ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mma n'ihi na iri nri na -atọ ụtọ, na -eme ka uche nwee ike ma na -enye ihe ụtọ ozugbo, ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu ihe nri pụtara n'ezie. Nri dị mkpa iji dị ndụ, mana n'ụzọ ọ bụla ekwesịrị ka ahapụ nri ka ọ chịkwaa ndụ gị.
Nke a bụ ihe na -eme mgbe ahụ riri ahụ, nke n'ozuzu mgbe a na -ekwu maka nri na -ezo aka na ụtọ, shuga ma ọ bụ, dị ka ọ dị, chọkọletị. Na ị hụrụ chocolate n'anya na kwa ụbọchị ị na -ahapụ onwe gị ka ị were ntakịrị, ọ nwere ike ịba uru n'ihi na ọ bụ nri nwere njiri mara ezigbo nri. Nsogbu na -abịa mgbe ọ na -agaghị ekwe omume ịgafe ma ọ bụrụ na mpempe ahụ, na -enweghị oke ahụ nke ahụ na -aghọ agwa na -eme ka ndụ dịrị.
Na nke a bụ ihe na -emekarị na ụmụaka yana ugboro ugboro. A na -eji chocolate, ihe ụtọ, ngwaahịa shuga eme ihe dị ka ụgwọ ọrụ ụmụaka na -ejikwa ya ruo mgbe ha ghọrọ ihe riri ahụ. Ọ bụrụ na nwa gị rapara na chocolate ma ọ naghị enweta ya kwa ụbọchị, nwere ike na -enwe otu ụdị ahụ ahụ onye ihe ndị ọzọ riri ahụ.
1 Kedu ihe m ga -eme ma ọ bụrụ na chocolate riri nwa m ahụ
2 Otu esi ebelata agụụ maka chocolate
Kedu ihe m ga -eme ma ọ bụrụ na chocolate riri nwa m ahụ
Ọ bụrụ na nwa gị na -ewe iwe mgbe ọ na -enweghị ike ịnweta chocolate mgbe ọ chọrọ ya ma ọ bụ na ọ nweghị ike ị drinkụ ya kwa ụbọchị, ọ nwere ike nwee obere nsogbu enwere ike idozi. Ihe dị mma gbasara ụdị riri ahụ bụ na chọkọletị bụ nri dị mma, mgbe ọ bụ ngwaahịa eke dị ọcha na -enweghị ngafe shuga. N'ihi na ebe ahụ ka nsogbu dị, chocolate adịghị riri nwatakịrị ahụ n'ezie kama ọ bụ shuga nwere.
Ọ bụ otu ahụ ka ọ dị n'ọtụtụ oge na iji lelee ya, ị ga -enyerịrị ụdị chocolate ọzọ ka ọ nwaa. Ọ dịghị mkpa inye ya obere chocolate dị ọcha na mberede, ịnwere ike ịnwale pasent 50 ma ọ bụ 70% koko. Ọ bụrụ na nwata ahụ ewere ya wee hụ ya n'anya, ị ga -enwe ahụ iru ala n'ihi na ọ masịrị ụtọ ụtọ koko na n'ọnọdụ ahụ ọ bụ nri nwere ọtụtụ uru ahụike.
Ma ọ bụghị ya, na ihe na -eme n'ọtụtụ oge bụ na nwata ahụ, mgbe ọ na -atọ obere koko ụtọ na obere shuga, jụrụ ya, n'ihi na ọ naghị atọ ụtọ, ọ bụghịkwa ihe okpo ọnụ ya na -eme. N'ọnọdụ, na mgbakwunye na ịchịkwa oriri nke chocolate, ị kwesịrị ịgbakwunye mbelata ngwaahịa shuga. N'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka nsogbu dị, ebe ọ bụ na shuga nwere mmetụta na -adịghị mma mgbe ejiri ya gabiga ókè.
Otu esi ebelata agụụ maka chocolate
Belata oriri chocolate n'ụlọ, zere ịzụrụ ya kwa ụbọchị ma nwee ya mgbe niile na pantiri ka ọ ghara ịkpata nchekasị n'ime nwa ahụ. Dochie chocolate mmiri ara ehi maka nhọrọ ndị ọzọ nwere obere shuga na abụba, ka nwa ahụ wee were koko dị ka o kwere mee na obere. Duces adịghị mkpa na nri ya mere oriri ya ka a na -atụ aro ya naanị mgbe ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ị na -eche na nwa gị na -a chocolateụbiga mmanya ókè ma ọ na -esiri gị ike ibelata ego n'ihi na ọ na -ewe iwe ma ọ bụ na -agbanwe omume ya, Gaa na dibia bekee ka o nwee ike inyocha ọnọdụ ya. Karịsịa, mara na ọ bụ nsogbu enwere ike iji ndidi, ntachi obi na nghọta mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Nlekọta » Ahụike » Chocolate riri nwa m nwoke, gịnị ka m ga -eme?
Otu esi enyere nwa m nwanyị dị afọ iri na ụma dị ime aka